Page-8 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
usiko 3K CNC ikhabhoni yokucoca i-fiber
I-3k glossy isilivere yecarbon fiber veneer cfrp amashiti
I-1k 3k 6k amaxabiso apheleleyo ekhabhathi kwiphepha lekhabhoni
5mm ubukhulu be-carbon fiber sheet CFRP sheet ye-quadrocopter
Iphepha le-CFRP lekhabhoni yokuqinisa i-epoxy resin pultruded plate
amandla aphezulu e-carbon fiber lamination board ye-cill yecarbon yecarbon yephaneli
Iphepha le-CFRP ikhabhoni ye-fiber i-hybrid sheet yecarbon fiberglass sheet
Isiko elisicaba entlokweni ejikeleze i-aluminium screws
I-Rc Elukiweyo yeKhabhoni yefibrethi
Amandla aphezulu e-cnc laser yokusika iphepha le-carbon
Amaphepha amabini aCF aHlangeneyo e-CF
Ikhabhoni yeCarbon Twill Uni Prepreg Sheets
Uqoqosho lwePlate yeCarbon Fibre Sheets
Professional Manufacturer kakhulu Strength OEM & ODM Carbon Fiber yokwehlisa
Umgangatho wekhabhoni esemgangathweni wekharbon yesiko
Ingcaciso yeMveliso usiko 3K CNC ikhabhoni yokucoca i-fiber Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon kuyindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo elungileyo....
Ingcaciso yeMveliso Iimveliso ezintsha ezishushu ezishushu ze-aluminium standoff Yintoni iresiphi? Iipleyiti ezisetyenzisiweyo ngokubanzi ezisetyenziselwa ngezikrelem.it zinentambo kumacala omabini endlela, xa usikrola ephepheni, izinto ezintathu zinokwenza iphelele. Isetyenziswe ngokubanzi kubomi bethu bemihla...
Ingcaciso yeMveliso I-Wholesale Drone fasteners self itshixayo aluminium nut Iialuminium zeAluminiyam zilungele izixhobo zedrone, ezenza ukuba i-drone ibonakale intle kakhulu. Ngama-nuts sinamantla amaninzi e-aluminium, Amantongomane eNtsimbi , i-hexagon yamandongomane kunye ne-nylon hexagon nut esitokhweni. Kwaye...
2,5 mm yeCarbon Fibre Matte Gqibezela Ingcaciso yeMveliso: I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye neemodus fiber eziphezulu zemathiriyeli engaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo komatshini. Ubunzima obunamandla beentsinga...
I-OEM / ODM Carbon Fibre Plate 1mm Ingcaciso yeMveliso: I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye neemodus fiber eziphezulu zemathiriyeli engaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo komatshini. Ubunzima obunamandla beentsinga zekhabhoni...
I-Autoclave OEM 3k iicwecwe zekhabhoniydi ezigcweleyo Ingcaciso yeMveliso: I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye neemodus fiber eziphezulu zemathiriyeli engaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo komatshini. Ubunzima obunamandla...
Ingcaciso yeMveliso I-Washers ezimibalabala yeAluminiyam yokuBala ye-Aluminium I-washers ze-Countersunk zisebenza ngendlela efanayo ne washer eflethi, kodwa zibonelela ngomhlaba othwele isikroba entloko. Izinto zokugqibezela ii-washers zibonelela ngomhlaba omkhulu othwala kunye nembonakalo egqityiweyo. Ingcaciso:...
Ingcaciso yeMveliso Isiko elisicaba entlokweni ejikeleze i-aluminium screws Hobbycarbon M3 7075 Aluminium isikhafu sithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sabo sokukhanya, amandla aphezulu kunye nemibala emihle edityanisiweyo kwintengiso. sinemibala eyahlukeneyo okhethayo, ihlala inombala o-9: obomvu, luhlaza, onsomi,...
Custom CNC Cutting Carbon Fibre Sheet Motorcycle Iintetho Inkcazo: Full Carbon Fiber Plate Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Bathi: pls usithumela umzobo (ifayile .dxf / ifayile .INyathelo) Kufuneka sazi ubungakanani bakho kunye nobukhulu :) A ifayibha ekhethekileyo yakhiwa carbon....
Intshayelelo yeMveliso I-Aluminium Standoff ithathwa ngokubanzi njengohlobo olunye Izixhobo zokugcina ukutya zeAluminiyam . Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho indawo ehleliyo phakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume bangaphakathi yintambo yangaphakathi, kwaye...
Iipleyiti zeglasi ye-Carbon zingasetyenziselwa ukutshintsha iiCarbon Fibre Plates zeedroni. Ubungakanani obuqhelekileyo beCarbon Glas Sheet emalunga ne-500x600mm. Ingcaciso yeMveliso: Izixhobo: Iglasi yeCarbon Ubunzima: 0.5-7mm imibala: imibala eqhelekileyo imnyama (eminye imibala ilungile kuthi) Ubungakanani:...
Ubungakanani beHarbon Fibre Shita elungiselelwe isiko Inkcazelo : Iphepha elipheleleyo leCarbon Fibre Iinkcukacha zexabiso : ixabiso lixhomekeke kuyilo nobungakanani. Ukukhumbula : pls usithumelele umzobo (.dxf fayile / .step file) Kufuneka sazi ubungakanani bakho kunye nobukhulu